खुल्लामन्च: December 2010
पाहुनाको कलममा भाई ईश्वरको रचना सान्दर्भिक लागेकोले कपि पेस्ट गरेको छु :
नरोउ अझै बलिन्द्र बलिन्द्रधारा आसुँ झारेर
नबुन, सपनाहरु छोराको आधार मानेर
बिर्स यो अभागीलाई।
यो कपुत अनी तिम्रो मुटु दु:खाइरहने
सधैं बाहाना मात्र बुनेर झुक्क्याइरहने गफाडीलाई।
सायद, छोरो जन्मियो भनेर
खुशीका आसुँहरु झारेकीथियौ होला
त्यो आसुँ अभिसाप बन्दैछ, तिमीलाई
तिम्रो खुशीमाथी दुख र पिरहरु,
घाऊ र चोटहरु दिने
चर्किएको आलो घाऊमाथी
अमिलो घसेर नुन र बेसार छर्दैछ।
यो कपुत र बेइमानी छोरोले।
तैपनी हेर अझै केही बर्षहरु
तिम्रो आसुँ पुछ्ने रुमालका
एक एक धागाहरु बुन्दैछु म।
कती बर्षहरु लाग्ने हुन, थाहा छैन
तैपनी अझै धैर्ये गर।
फेरिपनी एक्चोटी गफ लडाउदैछु म
आसाका त्यान्द्रो गास्दैछु,
नटुटाउ धैर्येका बाधहरु
एकदिन त सक्छु कि
त्यो आसुँ पुछ्न
एदी अझैपनी सकिन भने,
गालामा थप्प्ड मारौली।
आजसम्म तिम्रो सपना साकार पार्न सकिन
सोच गरे धेरै सपनाका महलहरु,
बालुवाको दलदले हिलोमा
जग खनेर घर ठड्ड्याउन खोज्दैछु।
तर भात्किये सारा सपनाहरु
तैपनी आमा पर्खनुस्!
केही हिउद र बर्षाहरु
यो साउनको झरिले एकपटक
अबस्य पखल्छ मेरा ग्रह दशाहरु.
अनी नयाँ बसन्तका पलुवाहरु पलाउनेछन।
जिबनमा रङी-बिरङी फुलहरु फक्रनेछन
नयाँ मकर सक्रन्तीपछी
सुर्येले मलाई शुभ फल दिनेछ।
सधैं औशीमात्र आउने मेरो जिबनमा
पुर्णिमाको एक झुल्को उज्ज्यालो छाउनेछ।
अनिमात्र म तिम्रो मुख हेर्नेछु,
मेरो जिबनका उपहारहरु
तिम्रा सपनाका प्रतिफलहरु
म एउटा पछ्येउरीमा पोको पारेर
उपहारस्वरुप तिम्रो हातमा थम्याउनेछु।
पख्ननुस् आमा! केही हिउद र बर्षाहरु,
आउनेछ,औसीको रातपछीको पुर्णिमा
अनिमात्र हेरौला तिम्रो मुख
र पुछौला, तिम्रा आसुहरु
पुरा गरौला मेरा र तिम्रा अतितका सपनाहरु।
अनी बल्ल त्यती बेला
भन्लेउ मलाई शिरमाथी हात राखेर
"छोरा"! त कपुत होइन रहेछस।
तेसैले पर्ख आमा! पर्ख!!
Posted by KhullaManch TV Links to this post Labels: पाहुनाको कलम